I-Motherboard ehamba phambili yeRyzen 5 3600 - Umhlahlandlela Wokuthenga (2020) - Pc
Vuselela i-9.1 evela ku-PUBG isanda kwethulwa futhi wonke umuntu uyayikhalazela.Ngokufanayo, uma udlala isizukulwane esilandelayo I-Call of Duty, ikudinga okungenani i-AMD Ryzen R5 1600X noma ngaphezulu kwamamodeli. Impela, ngeke ikunikeze ozimele abadingekayo ngomzuzwana. Uma ucabanga ukukhuphukela ku-Ryzen 5 3600, ibhodi yomama elisekelayo nayo ibalulekile.
I-motherboard ehambisanayo ikuvumela ukuthi uthole ukuthuthukiswa kumidwebo, i-RAM kanye ne-HDD. Ngalokhu, ngeke ukwazi ukudlala iMpi Yesimanje kuphela kodwa nemidlalo eminingi emangazayo.
Imihlahlandlela eminingi yokuthenga yama-Motherboard:
Amabhodi we-X570 amahle kakhulu
Kuhle Z390 Omama
Ungayikhetha kanjani i-motherboard enhle kakhulu ye-AMD Ryzen 5?
1. Amakhadi Wezithombe
Yize amabhodi womama eza nezinketho zokubhanqanisa kumakhadi wehluzo zangaphandle, kufanele futhi ibe nekhadi langaphakathi. Uma ucabanga ihluzo ze-AMD, zeRadeon, qiniseka ukuthi idivayisi oyikhethayo ithola ukufinyelela okuphelele ekhadini lakho lemidwebo. Ungabheka izinketho ezithile njengejubane lewashi nezinye ukuze wazi kabanzi ngalokhu. Ukwenza kuhambisane namakhadi emidwebo kufanele kube yinto ephambili kakhulu.
2. Ifomu Factor
Enye into ebalulekile okufanele uyicabangele yisimo sefomu sanoma iyiphi i-motherboard oyikhethayo. Zingafika ngobukhulu obuhlukile nobubunjwa. Kepha kubalulekile ukukala usayizi wekhabhinethi yakho nendawo. Uma i-motherboard yakho incane kakhulu, ngeke ilingane ngaphakathi kwekhabethe. Ngenxa yalokho, kuzofanela uqiniseke ukuthi ubukhulu abubuncane kunohlobo lwe-eATX yamabhodi womama.
Bambalwa kakhulu abantu ababheka i-PCI Slots njengenketho ebalulekile ongacabanga ngayo. Uma uthenga noma iyiphi i-motherboard, ungayithuthukisa eminyakeni embalwa kamuva. Ukwenza ngcono ezinye izinto ezifana ne-RAM noma amakhadi wokunweba kungabaluleka ngokulinganayo. Ukuba nenani eliphakeme lama-PCI slots kukuvumela ukuthi ubeke izinto eziningi zehadiwe ngaphakathi kwekhabethe lakho. Qiniseka ukuthi inenani elincane le-slot yekhadi le-PCI eligcwele ngesivinini esitholakalayo.
4. Uhlobo lwesokhethi
Njenge-slot ye-PCI, isokhethi lanoma iyiphi i-motherboard kungenye into ebalulekile okufanele uyicabangele ngenkathi usebenzisa. Kuyisici esibalulekile ukucabangela uhlobo olufanele lwesokhethi ngenkathi ukhetha i-motherboard. Kufanele kube nesokhethi elilodwa elilingana ne-CPU yakho. Kufanele futhi ihambisane nebhodi lakho lomama futhi. Ngaphambi kokuthi uqhubeke uthenge i-motherboard yakho, qiniseka ngohlobo lwesokhethi. Ngokuvamile, amasokhethi e-AM4 azosiza.
Izinketho ze-5.Motherboard Ukunwetshwa
Enye into enkulu okudingeka uyicabangele ukunwetshwa kwayo. Vele, ngeke uthenge kuphela i-motherboard bese uqhubeka nokuyisebenzisa. Uzongeza izandiso eziningi zehadiwethi ezifaka imidwebo, nezinye izici. Kubalulekile ukugcina isikhala sazo zonke lezi zandiso kumkhiqizo wakho. Ukuthola ibhodi yomama enezikhala ezijwayelekile ze-4 PCIe kungaba ukuthuthuka okukhulu.
I-Motherboard ehamba phambili yeRyzen 5 3600:
1. I-Asus ROG Strix B450-F I-Motherboard Yezemidlalo
I-Asus ibilokhu ikhiqiza amabhodi womama anokwethenjelwa futhi ngokuqinisekile, i-B450-F ibingomunye wayo. Lo mkhiqizo omangalisayo uza nokuhambisana okulula kwazo zonke izizukulwane zabaprosesa baseRyzen. Vele, uma uzimisele ukudlala imidlalo ephezulu nabalingiswa bakho obathandayo, lo mkhiqizo omangalisayo ongakhetha kuwo.
Izinketho zokuxhuma ezihehayo ezinjenge-M.2 kanye ne-USB 3.1 yinto ongathanda ukuba nayo ngalo mkhiqizo. Ukusetshenziswa kwezixhumi ezimbili ze-M.2 neGen 2 Type-A kuzokunikeza umphumela ongcono kuwe. Ukusebenza kwale bhodi yomama bekulokhu kukuhle futhi abathengi abaningi bathande ukuthi idlala kanjani phansi ne-CS: GO ne-PUBG. Ungafuna ukuba nalo mkhiqizo ukuze uwusebenzise njalo.
I-AMD B450 Chipset isizukulwane sakamuva sokusekelwa kweprosesa ongakuthola ngalo mkhiqizo. Le divayisi emangalisayo iza nombono we-cyber ozizwa umangalisa ukubuka izihlangu ze-ROG I / O eziqedelwe ekugcineni okumnyama kwe-matte. Ngokusobala, noma yimuphi umdlali oqeqeshiwe angathanda ukudlala ngalokhu njengomfowethu omncane.
Ngokwami, ngingathanda ukugcina i-ASUS B450-F kwi-PC yami ngoba kubukeka kumangalisa ebusuku. Ngike ngabona nezinketho zokupholisa ezimangalisayo ngenxa yabalandeli beFan Xpert 4 kanye nabalandeli beDC. Iqukethe unhlokweni we-PWM / DC ozinikele ongavimbela amasethingi wokupholisa amanzi. Vele, ngisho nasekamelweni elimnyama noma ngekhabethe elibonakalayo, kuyibhodi lomama wonke umuntu angathanda.
Okuhlangenwe nakho komthengi:
Abathengi bathola lo mkhiqizo omangalisayo ube yinani elikhulu lemali. Kunezizathu ezimbili ezikhethekile zabathengi zokukhetha le bhodi yomama. Okunye ukusebenza kokuncintisana okunikezwa yilo mkhiqizo kanti okunye umbono we-cyber. Akunasidingo sokusho, i-Asus ROG Strix B450-F Gamingboardboard iphakama ngaphezu kwakho konke kukho iphimbo elinobungane ephaketheni kanye nokusebenza elikunikezayo.
Le bhodi yomama iyisinqumo esihle kubadlali bamageyimu abathanda ukuthuthuka ngaphezulu kwama-processor ajwayelekile namabhodi womama abesekayo. Le divayisi ethile izodlula ngokuqinisekile abanye.
Ikhwalithi yokwakha yinhle kakhulu ukuyisebenzisa
Kubukeka kukuhle kwikhabhinethi ebonakalayo
Lo mkhiqizo uza nesoftware ehloniphekile
Ungathola ukwesekwa kwesitolo se-MI se-AMD
Intengo ikhululekile kakhulu ukuyisebenzisa
Ayikho imodyuli ye-wifi efakiwe nalo mkhiqizo
Ungahle ubhekane nokubhekwa okuncane kwe-BIOS
2. IGigabyte X570 AORUS Elite Motherboard
IGigabyte X570 elinye igama elihle esigabeni samabhodi womama amahle kakhulu weprosesa ye-AMD Ryzen 5. Iza nezibuyekezo ze-bios ezilula ngosizo lwesici se-Q-Flash plus. Ngisho nawe ngeke usethe i-CPU nememori ngoba ukufaka ifayela le-bios kwanele. Ibamba anhlobonhlobo ama-processor wokuqhafaza angahle athuthukise umuzwa wokudlala.
Ukwenza ngcono ukuphepha nokwakha umzimba, lo mkhiqizo uza nesihlangu esihlanganisiwe se-I / O. Ifakwe ngomzimba wensimbi osindayo nezinto zokuzivikela nxazonke ezikuvumela ukuthi uthole umzimba ohloniphekile. Ngenxa yalokhu, kuba lula kakhulu ukuthi le bhodi yomama yenze. Ikuvumela ukuthi uthole ukusebenza okungenamthungo nezinketho zokusetha okusheshayo ozosebenza nazo.
IGigabyte X570 ifaka umqondo omangazayo wedizayini kagesi eyi-12 + 2. Igcwele abalawuli be-PWM yedijithali nxazonke ezinhlangothini ezikuvumela ukuthi uthole izinto ezihloniphekile. Lesi silawuli sedijithali senzelwe ukukunikeza ngobuciko obumangalisayo. Ngenxa yalokhu, ikuvumela ukuthi uhambise amandla ezintweni. Ngakho-ke, impendulo evela ku-X750 imnandi.
Esinye isici esihlaba umxhwele ukuxhaswa kwe-DDR4 XMP. Le divayisi ingabuka kalula ku-4000 MHZ okwenza kube ukukhetha okuhle. Ukuthola ukusebenza uGigabyte wethule ikhebula leXM ngomkhiqizo wakhe. Ikuvumela ukuthi uthole ukukhuthazwa kokusebenza okusebenzayo. Isekelwa ngamadivayisi amabili we-M.2 SSD. Ngamunye wabo uza nonogada abashisayo ukugcina ukusetha konke kupholile.
Abathengi bathanda iGigabyte X570 AORUS Elite Motherboard ngenxa yokusebenza okuyisibonelo engakukhiqiza kalula. Iningi labo lidlulise umbono wokukhetha le bhodi yomama njengokusekelwa kwe-x570 okutholakalayo. Vele ngoba iza nezintengo zokuncintisana nokusebenza kwale divayisi akunakuqhathaniswa.
UGigabyte wethule le divayisi ukuhlangana okuphezulu kwemidlalo futhi kungaba ukulingana okuhle kochwepheshe. Lo mkhiqizo ufaka i-VRM heatsink esiza ukugcina zonke izinto ezifakiwe zipholile. Kukhona nezimbobo eziningi zokufaka ama-liquid coolers nxazonke zomzimba.
Iza ne-M.2 heatsink ngalo mkhiqizo
Isihlangu se-I / O esihlanganisiwe sikhona
Lo mkhiqizo unezigaba eziyi-12 ze-VRM yedijithali
Ukuthola ukufinyelela okulula, cindezela inkinobho ye-Q-Flash Plus
Ibhodi elikhulu linezixhumi ezingama-24 zamandla esixhumi
Ukukhanyisa kwe-RGB kungenzeka kube ngaphezulu
Ayikho imbobo yohlobo C etholakalayo
3. I-Asus Prime B450M-Ibhodi Yomama Yezentengiso
Abantu abaningi basebenzisa i-Asus Prime B450M-A njengebhodi lomama eliqeqeshiwe futhi baqinisile ngalomkhiqizo. Ngenkathi uxhuma, uzokwazi ukuthola ukuthi le bhodi yomama ixhuma kalula kuma-processor wesizukulwane se-3th Ryzen. Kodwa-ke, kuzofanele ubuyekeze ngesandla imenyu ye-bios uma ufuna noma yiziphi izinguquko.
Ifika ekuxhumekeni, le divayisi inokumiswa okuhle. Ungaxhuma ngqo i-LAN njengoba ikwazi ukufaka okokufaka okungu-1GB. Ukuvumela ukucushwa okwengeziwe, ngibonile abantu abaningi beyilungiselela nge-D-sub kanye nesibonisi se-DVI. Inketho yokuba nokufakwa kwe-HDMI 2.0 ikuvumela futhi ukuthi ubonise i-Xbox yakho noma i-PS5 ngokuya ngezidingo zakho.
Lo mkhiqizo uhambisana nokuhambisana kwezinqama kwe-DDR4 okumangalisayo okukuvumela ukuthi uthole isitoreji sememori esilula. Inezikhala eziyisithupha ezihlukile ze-RAM. Ungakwazi ukumisa ngesandla noma uqhubeke ungeza ama-RAM drives ngokuya ngezidingo zakho. I-chipset esekelwayo yakhiwe ngemodeli ye-AMD B450 ehloniphekile endaweni yokupholisa.
Ukuze unike amandla le bhodi yomama, idinga amabhethri e-lithium-ion. Yize ingezi nezixhumi ze-RGB, usengayisebenzisa le bhodi yomama enekhabinethi ebonakalayo. Inesisindo esincane ngokwedlulele futhi ngenxa yalokho, ukufakwa ngeke kube ucingo olunzima nhlobo.
Abathengi bathole ukuthi lo mkhiqizo uyamangalisa ngokwemvelo. Kuza nokusebenza okuhle okuthandwa abaningi. Kodwa-ke, kunabantu abathile, abacasukile ngempendulo yabathengi. Ukushintshwa kwale bhodi yomama kungathatha isikhathi esifinyelela emasontweni amabili. Kepha uma ubheka isabelomali nokuthi uthola ini ngalokhu, ukukhetha i-Asus Prime B450M-A kungaba inketho emangalisayo kuwo wonke umuntu.
Amabhodi we-ASUS ngokuvamile atholakala ngentengo yokuncintisana. I-Asus Prime B450M-A Commerce Motherboard nayo iza nomzimba ohloniphekile owakhiwe onesikhala ngaphakathi. Yize kungeke kube okungcono kunakho konke, izici nokusebenza kwale bhodi yomama okuletha ukwelashwa kuwo wonke umuntu. Noma yimuphi umdlali we-amateur angathanda ukumisa i-motherboard yabo nge-AMD Ryzen 5 3600.
Kuhamba kahle ngazo zonke izinhlobo ze-AMD zesizukulwane
Ungathola ukuvikeleka kokuqapha kwe-LAN okuzungezile
Ukusekelwa okuhle okuvela esikhungweni sokulawula se-ASUS
Inokuvikela okuhloniphekile i / o ukuvikelwa kwesihlangu
Lo mkhiqizo ufaka ukuvikelwa okwedlulele kwe-DRAM
IHeatsink ayiyona ehamba phambili phakathi kwabancintisana nabo
I-4.ASRock B450M PRO4 AM4 i-Motherboard
I-ASRock B450M Motherboard iza nokusebenza okuqinile nokupakisha okuhle futhi. Kuvikelwe kuzo zonke izinhlangothi ngocezu olulodwa lwensimbi futhi ikhwalithi isiyonke yesihlangu se-I / O nayo iyinhle. Kunamalebula ethekwini agxiviziwe avumela lo mkhiqizo ukuthi umangalisa ngokwemvelo. Ukuqhathanisa wonke amanye amabhodi we-mama kusuka ku-ASRock, i-Pro4 ingumkhiqizo omangalisayo ongakhetha kuwo.
Uma uza kumsindo, le divayisi ifakwe i-Realtek ALC892. Lo ngumshayeli ojwayelekile wezingxenyekazi zekhompyutha eziningi zomsindo futhi zilinganiswe ngokuvuza okungu-3uA. Vele, ungathola izilawuli ezilula kumazinga omsindo akuvumela ukuthi usebenzise iziteshi eziyi-7.1 ngezidingo zomsindo onamandla. Akunasidingo sokukhishwa kwe-optical, kepha ungathola imbobo ye-HDMI ukuthola imiphumela elula.
Ukusetha kwe-Bios kwe-ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard kuhle ukusebenzisa futhi kuza nokufinyelela okuphelele kumkhiqizo. Ungasebenza ngokusebenza ngayo yonke into kufaka phakathi ukuqapha, izinketho ezithuthukile, kanye nezimo ezeqisa ngokweqile. Zizokusiza ukuthi uthole futhi ulungise amazinga wokulawula. Ngeke uze ubuyekeze ngokwenza ama-bios.
Ngenkathi ngivivinya lo mkhiqizo, ngithole ukuthi uza nemiphumela eyeqile yokweqa ngokweqile. Ngokwami, bengilindele cishe i-1V ngenkathi ngisebenza. Kodwa-ke, imiphumela ihlukile kakhulu ekusetshenzisweni uma kukhulunywa ngokufeza. Kubonakale sengathi lo mkhiqizo uthole isivinini esizinzile se-4.2GHz ngokudlula ngokweqile ku-1.43V. Awekho amabhodi we-mama amaningi eza phezulu ngokusebenza okuhlukile.
Ngibone abathengi abaningi beba nentshisekelo kulo mkhiqizo. Iningi labantu likhetha lo mkhiqizo njengebhodi lomama elimnandi kusuka ku-ASRock. Ngenxa yesitoreji se-M.2 nokusebenza okumangazayo, kubonakala njengokukhetha okuphezulu. Ngaphezulu kwalokhu, i-ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard yethula umugqa we-RGB kuwo wonke lo mzimba. Ngenxa yalokhu, kuba ukukhetha okuhle kuwo wonke umuntu.
Lapho intengo ifana nokusebenza, akukho okungaba ngcono kunokusebenzisa i-ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard. Yenza lula ukusebenza ngehluzo ezisezingeni eliphakeme nokusekelwa kweprosesa. Noma yimuphi umthandi womdlalo osezingeni eliphezulu angathanda ukuba nale divayisi ekhaya labo.
Lo mkhiqizo uqukethe ukuvikelwa kwejubane eliphezulu nokuvalwa ngokweqile
Inemichilo emisha ye-RGB ukuyenza ibukeke ikhanga
Iza nomsindo webanga leGaming onamandla emvelweni
Umkhiqizo uza nemiphumela ehloniphekile yesitoreji se-M.2
Ixhasa i-PCIEx16 ehloniphekile yekhadi lehluzo elihle
Umthamo wesitoreji ungathuthuka kancane
Isici sokupholisa amanzi singathuthukiswa
5. I-MSI Performance Gaming Mini-ITX Motherboard
I-MSI yakhele amabhodi womama amaningi wokudlala, futhi ngokuqinisekile, lena ikhethekile kuyo yonke imigomo. I-MSI Mini-ITX iza nama-software aphelele avela kumenzi. Ikuvumela ukuthi usethe ama-bios ngokushesha futhi uthole ukulawula okuphelele kwaleli bhodi. Ukuba nesoftware ngaphezu kwamashayeli amancane kuhlala kuyinzuzo enkulu. Ungathola imininingwane ephelele yokusebenza.
I-On-board audio ikuvumela ukuthi uthole indlela elula enekhwalithi yomsindo onamandla. Inama-capacitor aseJapan alalelwayo enza le divayisi ibe nkulu ukuze uyisebenzise. Amabhodi womama amaningi we-MSI anaso lesi sici esivamile njengoba kukuvumela ukuthi ulungiselele amadivayisi womsindo wangaphandle ezinhlangothini zombili ze-PCB. Inikeza ngokwahlukana okuningi kwe-stereo okungathuthukisa isiteji sangemuva.
Ukusekelwa kwememori kweMini-ITX kungenye yezinto ezikhulunywa kakhulu ngalo mkhiqizo. Ikuvumela ukuthi ufake ama-DIMM Slots amabili angafaka isikhala sememori ye-RAM engu-64 GB DDR4. Ngaphandle kwalokhu, ungathola ukwesekwa okukodwa kwe-3.0 × 16 PCIe. Lokhu kudala inzuzo eyengeziwe kumkhiqizo okunikeza izinketho zokugcina ezingcono. Akuwona amabhodi we-mama amaningi eza nezilungiselelo ezinjalo ezithuthukile.
Izici ezinjengokupholisa kwe-VRM nokudlulela ngokweqile kwenza lo mkhiqizo umangaze futhi. Awekho amakhona amaningi nxazonke, kepha ngokuqinisekile kuveza ukumiswa kwesigaba se-VRM esingu-6 + 2. Ungalindela umoya opholile ozungeze i-CPU yakho noma ngabe usebenza isikhathi eside. Ukuze uthuthukise ikhwalithi, i-MSI yethule izigaba ze-IR3555 PoweR ezitholakala ikakhulukazi kwamanye amabhodi womama aphezulu.
Isici esisodwa esithandwa abathengi abaningi ngalo mkhiqizo umzimba owakhiwe kahle futhi ongabizi. Intengo esetshenziselwe lo mkhiqizo incintisana kakhulu emvelweni futhi ivumela i-MSI Performance Gaming Mini-ITX Motherboard ukudlula abanye. Ngizamile mathupha le bhodi yomama ku-pc yomngani wami futhi kubonakala sengathi isebenza kahle ngenkathi idlala i-GTA Vice City.
Uma ufuna idivaysi ezokunikeza ukulawula okuphelele nokusetha okusheshayo, i-MSI Performance Gaming Mini-ITX Motherboard ingumkhiqizo ofanele ongawukhetha. Kuza nezitika eziningi zelebula kanye nezimpondo ze-WiFi zokuxhaswa kwe-premium. Ungathanda ukusebenzisa le mikhiqizo ukuthola imiphumela yakho ejwayelekile.
Ukupholisa nokulungiswa kwe-VRM kwakhiwe kahle
Iza nokuxhaswa kwe-WiFi AC ne-Bluetooth okwakhelwe ngaphakathi
Lo mkhiqizo unezici ze-B450 chipset
Ungathola ukusethwa okulula nokulungiswa okwenziwe ngemizuzu
Ukusekelwa okuvela esikhungweni semiyalo seMSI kuhle ukusebenzisa
Intengoyaleli bhodi lomama liphakeme kakhulu
Alikho ikhodi yeposi LD etholakalayo ngalo mkhiqizo
6. I-Asus AM4 TUF Gaming X570 Motherboard
I-Asus AM4 yethulwe ekuqaleni njengemodeli enobuchwepheshe obedlulele. Yize inani lale bhodi yomama liphakeme kancane, izici ozithola ngale divayisi ziyiletha njengenye yamamodeli ancintisana kakhulu. Uma usebenzisa noma iyiphi imodeli yeRyzen 3000, lokhu kufanele kube ukukhetha okuphezulu ongakusebenzisa. Inketho ye-WiFi ne-Bluetooth ethuthukisiwe ikwenza kube umkhiqizo ohloniphekile ongakhetha kuwo futhi.
Le divayisi iqine ngokwedlulele futhi izinzile ukuyisebenzisa. Ifika emzimbeni owodwa wensimbi we-I / O ovikelekile kuzo zonke izinhlangothi. Zonke izinto ezibalulekile zengxenyekazi ye-AMD ziza nezinto ezilungele umdlalo. Odinga ukukwenza ukumane ufake lo mkhiqizo futhi uzoqala ukusebenza ngokushesha. Uma kuza kokucacisiwe, lo mkhiqizo unezakhi zebanga lezempi nxazonke zomzimba ozinzile.
Isici sokuklanywa kwamandla kwalo mkhiqizo omangalisayo siyindlela enhle kuwo wonke umuntu. Ine-VRM ethuthukile ngosizo lwezigaba zamandla eziyi-12 + 2. Ungasebenzisa lesi sici ukuhlanganisa womabili amashayeli we-MOSFET anamahlangothi aphezulu nangaphansi akusiza ukuthi uthole konke kuphakethe elilodwa. Iphinde iveze zonke izidingo zakamuva zama-processor zemiphumela emihle. Ukuba khona kwezigaba zamandla kaDkt Mo kuchaza ukusetshenziswa kwamandla kangcono kakhulu.
Ukuza ebukhoneni be-VRM, i-Asus AM4 ibonakala ipholile kakhulu kunanoma yimuphi umkhiqizo. Kuza ne-heatsink esebenzayo ezinikezelwe ku-PCH kanye ne-VRM. Ngenxa yalezi zici, kuba lula ukusebenzisa konke ukumiswa kwekhwalithi ephezulu ngenkathi udlala imidlalo. Ungathola ukufinyelela kukho kokubili okokupholisa ketshezi nabalandeli.
Wonke umthengi othenge i-Asus AM4 TUF Gaming X570 i-Motherboard ngokushesha wayithanda lo mkhiqizo omangalisayo. Kuza nokucushwa kwehardware okuhle okushesha ukusetha futhi. Kungukukhishwa okusha futhi ngenxa yalokho, ngeke kudingeke ukuthi ulinde izibuyekezo futhi.
I-Asus AM4 TUF Gaming X570 Motherboard yenzelwe ngokukhethekile izidingo zokudlala ezisezingeni eliphakeme. Konke ukucaciswa kwalo mkhiqizo kuhle ukusetshenziswa futhi kuklanyelwe ukusebenza ngokushesha. Izinkinga zokweqa ngokweqile zehliselwa emazingeni aphansi kakhulu futhi.
Intengoyaleli bhodi lomama linokuncintisana okukhulu
I-Asus AM4 iza nokuxhaswa kwe-UEFI bios
Kuza nokusekelwa kokupholisa okusebenzayo ku-chipset
Ungathola ukwesekwa kwe-2.5 Gb LAN
Ihambisana kalula ne-Ryzen 5 3000 CPU
Akunasibuko se-PCIex1 esizinikezele
Ngeke uthole noma iyiphi i-USB 3.1 slot etholakalayo
Yini iRyzen 5 3600?
I-AMD Ryzen 5 3600 ngokuyisisekelo iprosesa eyisixhumi eyethulwe yi-AMD. Cishe wonke umuntu emhlabeni wokudlala uyazi ngale processor ngenxa yokucaciswa okuphezulu namandla okulayisha angakhuphula. Ekhuluma ngokucaciswa, lo mkhiqizo omangazayo uza nezingxenye eziyishumi nambili zomshini we-AM4 processor. Ukwakhiwa okuqondile kweZen 2 kusetshenziselwa ukukhiqiza lo mkhiqizo. Noma iyiphi iprosesa yeRyzen enokuthuthuka okunjalo izofaka ukusebenza okumangazayo ngenkathi udlala imidlalo oyithandayo.
Amabhodi womama we-AM4 asevele enedumela lokusebenza okuhle, kepha le processor idinga izici ezingeziwe. Kungakho ama-gamers abheka i-motherboard ehambisanayo ezohamba kahle nalo mkhiqizo. Kufika ekucacisweni kwezobuchwepheshe kwe-AMD Ryzen 5 3600, yakhiwe ngejubane lewashi elingu-3.6 GHz laya ku-4.2GHz.
Njengoba isekela i-DDR4 RAM eneziteshi ezimbili, ukumatanisa namabhodi womama anjalo kungakusiza ukuthi uthole imiphumela engcono nganoma yisiphi isikhathi. Abasebenzisi kufanele babheke phambili ekuthengeni ibhodi yomama enamandla aphezulu ngokuya nge-GPU ne-CPU. Ngokwenza lokhu kuphela, uzobe uhlangabezana nezidingo ezinhle kakhulu zemidlalo.
Iphinde ifike namandla angama-65W Design afaka ne-stealth cooler eyakhelwe ngaphakathi. Ngamazwi alula, kukhombisa ukuthi le processor izoshisa.
Ngabe iRenzen 5 3600 ingcono kune-i5?
Zombili iRyzen 5 neCore i5 ziyizintamo entanyeni lapho ngiqhathanisa imininingwane yazo. Kodwa-ke, i-AMD ihamba phambili kancane uma kukhulunywa ngokusebenza kanye nentengo yesabelomali. Impela, amaprosesa asuka ku-Intel abekwa ebangeni eliphakeme. Lokhu ikakhulukazi kungenxa ye-heatsink. Vele, iRyzen 5 ine-heatsink ephansi, kepha i-core i5 iphansi kakhulu ngenkathi iqhathanisa.
Uma uqhathanisa nokunye ukucaciswa njengokusebenza, isivinini sewashi, nokucaciswa kucishe kufane. Yize izici zobuchwepheshe zazo zombili zifana, ukusebenza kweRyzen 5 kuyamangalisa futhi kuhamba phambili kancane kwabanye! Ukusetshenziswa kwamandla kwe-Intel kuncane kancane. Kepha akuphazamisi nhlobo ukusebenza.
Kungani iRyzen 5 3600 ithandwa kangaka?
I-Ryzen 5 inomncintiswano oqondile ku-Intel core i5 noma amamodeli wokugcina aphansi avela ku-AMD futhi. Usuvele udlule entengo yamanani futhi kubonakala sengathi iRyzen 5 ayinaphutha kulokhu.
Ukulunga, kuza nazo zonke izici ezikhethekile ezingathwalwa yinoma iyiphi iprosesa ephezulu. Ngakho-ke udinga i-motherboard ehambisanayo yalokhu. Usebenzisa i-motherboard yakho yakudala eneRyzen 5 ngeke ikwenze uma kungekho ukusethwa kwe-bios kufakiwe. Itholakala kalula kunoma yisiphi isitolo esiku-inthanethi futhi intengo enikezwayo iyahambisana kakhulu.
Ngabe ngidinga ukubuyekeza i-BIOS yeRyzen 5?
Konke ukuthuthukiswa kwesistimu kudinga isibuyekezo somshayeli. Ngakho-ke uma ungakhethi isibuyekezo se-bios, abashayeli behardware ngeke basekele. Ukuvuselelwa okuncane kwemidwebo kungaqondakala. Ngokuqinisekile ukushintsha lonke ibhodi lomama kuzodinga ukuthi uthuthukise ngokuphelele ukusethwa kwe-bios. Ngisho ngikuzamile lokhu futhi amanye amabhodi womama afana neGigabyte X570 azowenza lo msebenzi ngokuzenzekelayo.
Zingaki izihloko zabalandeli engizidinga iRyzen 5?
Manje lokhu kuzoya ngohlobo lomsebenzi ozobe uwenza. Isibonelo, ake sicabange ukuthi uthenge le processor ngokudlala okuphezulu. Noma ibhodi yomama ehambisanayo inezinketho zokushona ezihloniphekile, ama-processor we-AMD ayashiswa ngezinye izikhathi. Ingqikithi yezihloko ezinhlanu zabalandeli ingaba yinto enhle ongayisebenzisa. Isixhumi sepompo yomoya sokupholisa uketshezi nakho kungaba yindlela elula.
Ngabe izosebenzisa iFortnite ngekhadi lemidwebo esemgodini?
Ukukhuluma iqiniso, awukho umqondo onjalo wekhadi lemidwebo ebhodini etholakala ngalo mkhiqizo. Lapho uzimisele ukudlala i-Fortnite, udinga ukuqinisekisa ukuthi zonke izidingo zehadiwe ziyahlangabezana. Ukudlala i-Fortnite, kufanele okungenani ube ne-AMD Radeon HD 7870 noma iGeForce GTX 660 noma amamodeli athuthukisiwe. Impela, ukugcina lokhu engqondweni, kuzofanele uqiniseke ukuthi konke kuhamba kahle.
Ngivuselela kanjani i-Ryzen 5 3600 BIOS yami?
Kunezinqubo ezihlukile ongazilandela uma ufisa ukuvuselela imenyu yakho ye-bios. Amanye amabhodi we-mama afana neGigabyte anikezela ngemenyu ye-q-flash ekuvumela ukuthi umane ulande leli fayela futhi uphumule kuzoba kwi-pc yakho ukufaka izibuyekezo noma nini lapho kutholakala. Kodwa-ke uma uzimisele ukwenza ukubuyekeza okwenziwa ngesandla, ungalanda ama-bios kunoma iyiphi i-flash drive bese uyinamathisela.
Ingabe i-x570 yeqa ngaphezulu kwama-3600?
Lokhu kuzoya ngokuthi iziphi izingxenye i-motherboard yakho efakwe kuzo. Uma kumane kuneRyzen 3600, ngeke yeqe iprosesa. Kepha uma kukhona ukuthuthuka okuhlukile kwi-hardware njenge-gpu noma i-RAM ebanzi, kuzokweqa kancane. Ngokucabangayo, uma kunokushoda kwezinye izinto zehadiwe, le bhodi yomama izothambekela ekushodeni kwesinye isikhathi.
Ngabe iRyzen 5 3600 idinga ikhadi lemidwebo?
Lokhu futhi kuya ngohlobo lomsebenzi ozowenza nge-pc yakho. Ukukhuluma iqiniso, lo mkhiqizo awufiki nanoma yiluphi uhlobo lwehluzo olufakiwe noma olwakhelwe ngaphakathi. Okukhipha imidwebo ongakuthola kuncane kakhulu futhi kuhlala kudinga ukuthi ungeze okukodwa. Ngokuya ngohlobo lomsebenzi owenzayo njengokudlala imidlalo ye-HD noma amavidiyo wokukhipha ephezulu, kungadingeka ukuthi ufake i-gpu ngaleli bhodi lomama.
Ingabe kuhle ukugembula ukukhetha iRyzen 5?
Yebo kunjalo. Azikho izinkinga eziningi ekukhetheni iRyzen 5 futhi kufanele ihlangabezane nokulindela kwakho. Uma ucabanga ngeRyzen 5, inejubane lewashi elimangalisayo. Ngakho-ke isipiliyoni esingaphakathi komdlalo nale processor kuzofanela sihambe kahle. Ngasikhathi sinye, iziqu ze-AAA zivelele ukuzisebenzisa ngokumelene nale bhodi yomama. Kuzokusiza ukuthi ulande amafreyimu amahle ngomzuzwana.
Ukukhetha i-AMD Ryzen 5 3600 kungaba inketho enhle kubantu abazimisele ukudlala imidlalo efana neFortnite noma ngisho nokushayela iDuty: Warfare yanamuhla. Ukucaciswa okudingekayo kokudlala imidlalo enjalo kuzoba ngaphezulu.
Ngakho-ke, ukukhetha isethi ehambisanayo yehadiwe njengeGPU, i-RAM noma i-motherboard ehloniphekile kubalulekile. Amabhodi womama ahambisanayo avumela le processor ukuthi ihlale ipholile noma ngabe ikhiqize inani elikhulu lokushisa.
Uma umane ungafuni ukuthi iprosesa yakho ikhubazeke lapho idlala umdlalo wakho owuthandayo, khetha noma yikuphi phakathi kwalolu hlu lwamabhodi womama amahle kakhulu we-AMD Ryzen 5. Sazise ukuthi iyiphi oyithande kakhulu nokuthi yimiphi imisebenzi yayo.
iwebhusayithi ukubuka ama-movie amasha
buka amavidiyo akatholakali ezweni lakho
amasayithi wokusakaza we-tv amahle kakhulu online
ama-imeyili amahhala namaphasiwedi we-netflix